UMPHATHI WE-OASIS NGAPHAMBILI U-NOEL GALLAGHER UYALA UKUBEKA IIMASKI PHAKATHI KOBHUBHANE - IINDABA
Umphathi we-Oasis ngaphambili u-Noel Gallagher uyala ukubeka iimaski phakathi kobhubhane
ngokweLanga lase UK . Ndaya eManchester kwiveki ephelileyo ndizilungiselela kwaye le ndoda yayifana, 'Ngaba ungazibeka iimaski zakho, ngenxa yamaPolisa oThutho aza kubuya kwaye abambe imali eyi- £ 1,000? Kodwa akufuneki uyinxibe xa usitya. '
Bendihlala ndisithi, 'Hayi ngokufanelekileyo, le ntsholongwane ibulalayo etshayayo ngokulungiselela iya kusihlasela nangona kunjalo izakundibona ndiphethe isandwich kwaye ndihambe, ndiye kuye, utya isidlo sasemini.
Ngaba lee sesame yesitalato
Imvumi yaseWonderwall yongeze yavuma ukuba iqeshe i-jet yobuqu yohambo lwenyanga yokugqibela ukuze ingabinakho ukubeka iimaski, kuba ukukhusela ukufihla kuyafuneka kuzo zonke iinqwelomoya.
Sasibathandathu kwaye sasifana, 'F saya eHeathrow kwaye simatsha sijikeleza kwaye sazisiwe ukuba senze ntoni,' utshilo. Ke sityibilike ngejet engaqhelekanga kwaye yayintle kakhulu.
Kwilinge lokuzama ukuthobeka, uGallagher wenza umgaqo-siseko wakhe wejet owawungekho esidlangalaleni.
laliphi elona xesha limnandi lifotwe
Ayisiyonto inye endiyenzayo kuba zibiza imali ngenxa yoko ziyiyo ibhola yokufumana inqwelo moya kwiimask, wachaza. Bendiqhele ukufana, 'F-kulungile.'
Izigaba: Iwiki Umqala Iindaba
Uphi uKelly ovela kwi-tmz
I-sgx nyc ioyile yokubonisa engabonakaliyo
Iifilimu zekrisimesi zeekhamera
Umtsalane we-tv chicago pd
ube ngumjelo wetomson 7